Ungawenza Kanjani Ukuqeqeshwa Kwebhizinisi Ngokufanele | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Ungawenza Kanjani Ukuqeqeshwa Kwebhizinisi Ngokufanele
(Kugcine ukubuyekezwa On: 31/03/2021)
Ukukhungatheka nesikhathi esichitha isikhathi emigqeni wokungena esikhumulweni sezindiza kanye nokuminyana kwezimoto esikhumulweni sezindiza konke kwaziwa kakhulu ngezamabhizinisi. Kungakhathaliseki ukuthi bayahamba ku emfushane Ohamba ngezebhizinisi ngesitimela noma umuntu eside oluzothatha amahora ambalwa, noma izinsuku, travel zemininingwane Lebhizinisi ngokuvamile eshibhile futhi ngokushesha kunezinye izinhlobo travel. kodwa isivinini kanye nezindleko akuzona izinzuzo kuphela kojantshi travel. Bheka zonke izinzuzo ngezansi.
Ucwaningo lwembula ukuthi lesi ethandwa kakhulu ahlobene ibhizinisi- indlela travel ngesitimela, ngokumelene emoyeni nenkokhelo yokuqashwa imoto travel. Izincwajana zemininingwane menuItem.conference Ukuhamba ngezebhizinisi iyona Imodi esheshayo zokuthutha iminyaka engaphezu kwesigamu eyisithunywa (kanye izikhathi zokungena nokufika komoya zabhekwa) futhi kubiza cishe okwesihlanu intengo ngezindiza nengxenye yesithathu ukushayela ukuya endaweni oya kuyo.
ngezamabhizinisi futhi abathengi bezokuvakasha ezinkampani banayo ithuba lokunciphisa izindleko zokuhamba nakakhulu futhi amathikithi ncwadi ngendlela eyenza uhambo njengoba elula ngangokunokwenzeka umgibeli. Zama athenge amathikithi esitimela ngemali Online yokubhuka nge SaveATrain nokuhlela kusengaphambili kuyindlela engcono kakhulu yokuthola amadili amazing!
Rimini Milan Izitimela
ETurin Milan Izitimela
Khulisa Isikhathi Sakho Lapho Ukuhamba Kwebhizinisi Lesitimela:
Uma u travel ngesitimela uyoba inketho ukubhuka ithebula esihlalweni kusengaphambili okusho ukuthi ukwazi ukuqhubeka usebenza uma usohambeni, okwenza isikhathi sakho aphume ehhovisi!
Hlola zakamuva yakho uhambo Imininingwane intanethi noma ubhalisele izaziso ze-SMS. Uzokwaziswa kwanoma iyiphi ukubambezeleka noma izinkinga endleleni ngaphambi kokuya esiteshini.
Lecce ukuze Florence Izitimela
Bari eRoma Izitimela
Izincwajana zemininingwane Business Travel yabagibeli:
Ezinye zezitimela ukunikela ibhizinisi ekilasini yabagibeli lapho amakhasimende igunya ungakhululeka bese ukufinyelela WiFi nokusebenza izikhala. Fika kohambo lwakho kancane ekuqaleni? Wasebenzise kahle amathuba ezingxoxo labo izikhala ukuze umsebenzi othile kwenziwe ngesikhathi usalindile.
Izincwajana zemininingwane travel banganikeza izinzuzo eziningi luhlobo-based yayo ngezamabhizinisi. Esinye isibonelo salokhu kungabandakanya e-esiteshini futhi on-isitimela-Wi-Fi. Lokhu kunika amandla abagibeli ukuze ahlale exhunyiwe ngenkathi ethutha. Okuthile okuyinto akunakwenzeka uma ehamba ngemoto.
Schiphol eLondon Izitimela
Enye yezindlela ezingcono kakhulu ukuqala kwesokudla isitimela sakho ngezamabhizinisi iwukuba ukuthenga amathikithi akho isitimela inthanethi usebenzisa Londoloza-A-zemininingwane !
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-business-travel%2F%0A%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#businesstravel #railwaystation longtrainjourneys Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela Izikhangibavakashi traveltips